Archive du 20180522
Loza mahatsirana Vehivavy bevohoka sy ny zanany niara-novonoina
Sakaosy goavam-be niloko manga no hitan’ny mpiandriaka sy ny mponina mpampiasa ny reniranon’Ivondro natsingevan’ny rano manamorona ny fokontany Mahasoa Kaominina Ambokarivo atsimokelin’i Tanandava Toamasina ny alahadin’ny pantekoty tokony ho tamin’ny 7 ora maraina.
Mpitondra fanjakana Tsy mazoto mijanona eto an-drenivohitra
Tsy maintsy misy olona na sokajin’olona mitabataba sy mitaraina isan’andro noho ny afitsoky ny fitondrana ankehitriny. Vao mainka nanamafy izany ny zava-misy eo amin’ny lafiny politika sy ny andrim-panjakana. Manoloana ny zava-niseho ny talata lasa teo tao amin`ny Lapan`ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina dia tsy dia re feo teto an-drenivohitra intsony ireo mpitondra fanjakana ambony.
Fampihavanam-pirenena Tsy mazava ny paikady sy tanjona
Tafatsangana ao anatin’ny CFM izany iny ny komity teknikan’ny fampihavanam-pirenena misy ny solontenan’ireo 4 mirahalahy mpitondra fanjakana teo aloha.
Antoko ToVM “Azo averina ny tamin’ny 1991 !”
Mizotra any amina dingana vaovao hatrany ny raharaham-pirenena ary sesilany ihany koa ireo fanehoan-kevitra mifandraika amin’izany.
Hentitra ny eny amin’ny 13 mey “Tsy maintsy azontsika ny fandresena”
“Na inona na inona ambaran’ny HCC, tsy maintsy azontsika ny fandresena”. Izany no resaka teny amin’ny kianjan’ny 13 mey ny sabotsy lasa teo.
Olom-pirenena mitovy fomba fijery Tsy mahavaha olana ny mpanao politika
Nivondrona ho iray ireo olom-pirenena mitovy fomba fijery eto amin’ny firenena. Anisan’ireny i Ndranto Razakamanarina avy ao amin’ny Alliance Voahary Gasy, Fanirisoa Ernaivo filohan’ny sendikan’ny mpitsara, Mamitiana Razafimandimby filoha tale jeneralin’ny Scoop digital, Françis Razafiharison na i Françis Turbo mpanao hatsikana sady mpanentana ary Rado Rabarilala, mpikambana ao anatin’ny sendikan’ny mpiasan’ny Air Mad.
Didim-pitsarana manala ny filoha Mandeha ny tsindry samihafa…
Iankinan’ny filaminana sy ny fikorontanan’ny firenena ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana amin’izao fotoana. Andrasana fatratra ny valin’ny fitoriana mangataka ny fialan’ny filoha amin’ny toerany.
Rafanomezantsoa Jean Nirina “Ilana fanovana ny fanaovana politika eto amintsika”
Tsy mitsaha-mivoatra ny toe-draharaham-pirenena misy eto amintsika ankehitriny. Manoloana izany dia nivoaka tamin’ny fahanginana indray ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy no sady kandida amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena.
Berija Ravelomanantsoa Hametraka fitoriana fiandry
Sesilany ny fanambarana ataon`ireo fikambanana sasantsasany milaza fa miaro ny firenena tsy hilatsaka ao anatin`ny krizy manoloana ny fandrahonana ataon`ireo depiote ho an`ny fanovana.
Mahereza eee !
Miarahaba e ! Ahoana ihany ny momba anareo ity ry Jean a ? Efa mba mahare ny tabataban’ny olona ihany ve sa tena mbola any amin’ny planeta tsy fantatr’anarana ?
Ambatomirahavavy Maro ireo ankizy tsy afaka manohy ny fianarany noho ny fahasahiranana
Maro ireo ankizy tsy afaka manohy ny fianarany intsony ao anatin’ny kaominina Ambatomirahavavy sy ny manodidina noho ny fahasahiranana mianjady amin’ireo ray aman-drenin’izy ireo.
Building Ramaroson Toeram-pivarotana 20 may kila
Nirehitra ny toeram-pivarotana sinoa miisa 20 etsy amin’ny Building Ramaroson etsy Soarano tao ambany rihana sy ny rihana voalohany ny alahady antoandro teo.
Hery Rasoamaromaka Tadiavin’ny fanjakana hampanginina ?
Anio maraina amin’ny 8 ora no hantsoina hatao fanadihadiana eny amin’ny Toby Ratsimandrava i Hery Rasoamaromaka na Hery Be, sekretera nasionalin’ny antoko TGV Analamanga, anisan’ireo mafana fo amin’ny fanohanana ny hetsiky ny depiote ho an’ny fanovana.
Mariazin’ny Printsy Harry sy Meghan Markle 141,6 miliara ariary nolaniana tamin’ny fitandroana ny filaminana
Mariazina mpanjaka, nanetriketrika ny an’ny Printsy Harry sy Meghan Markle ny sabotsy lasa teo tany Londres.
Eglizy Katolika Voatendry ho Kardinaly ny Mgr Désiré Tsarahazana
Nanendry kardinaly vaovao miisa 14 ny Papa François nandritry ny fankalazana ny “Anjelisy” na ny nidinan’ny Fanahy Masina tamin’ny Apostoly ny alahady 20 mey 2018 teo tao Vatican, ka anisan’ny nahazo i Madagasikara.
Ligin’ny baolina kitra Analamanga Niavaka ny fanolorana an’ireo amboara tamin’ny sabotsy teo
Ny lalaon’ny Cnaps Sport Tanà sy Elgeco Plus nirava tamin’ny 1- 1, tamin’ny sabotsy 19 mey teo tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina, no namarana tanteraka ny fiadiana ny ho tompondakan’ny baolina kitra Ligue 1 eto Analamanga ka nanolorana an’ity farany ny medaly volamena sy ny amboara maha-tompondaka 2018 azy tamin’izany niampy ny lelavola 1 tapitrisa ariary nomen’ny ligin’ny baolina kitra Analamanga.
Rugby 35 taona 3FAI andro faha-2 Fbm sy Tfa ary Ftm no tafita amin’ny famaranana
Vita tetsy Mahamasina tamin’ny alahady 20 mey lasa teo ireo lalao 1/2-dalana faharoa amin’ny fifaninanana fankalazan’ny fileovana 3Fai Ambalavao Isotry ny faha-35 taonany.
Basikety Tompondakan’i Madagasikara Raikitra any Toamasina ny N1 B vehivavy sy U 20 zatovolahy
Raikitra any Toamasina nanomboka tamin’ny saobotsy 19 mey teo ka tsy hifarana raha tsy ny alahady faha-27 mey 2018 ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny taranja basikety baolina sokajy N1 B vehivavy sy sokajy U 20 zatovolahy. Ekipa 12 nosokajina ao anaty vondrona 2 ny eo amin’ny N1 B vehivavy.
Iza no mitady sorona ?
Mitohy ny tolona ! Izay aloha no fanamarihana voalohany tsy maintsy miainga.
Hopitaly HJRA Ampefiloha Telo no namoy ny ainy nandritra ny fety
Telo no namoy ny ainy nandritra ny fankalazana ny fetin’ny pentekosta lasa teo tetsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha. Ny iray tamin’izy ireo matin’ny toaka vokatry ny fisotroana diso tafahoatra.
“Marché Interbancaire des Devises » Misy tombony ara-toekarena ny fanafoanana azy
Ny Banky Foibe no mpandrindra sy mpanara-maso ny fifampivarotana rehetra rehefa avy mifantina ireo banky tsotra (primaire) hisehatra amin’ny Marché Interbancaire des Devises (MID) izy.
Poetic lover tao Antsahamanitra Ambiansy tanteraka
Nahafinaritra ny fiarahana ary tsy ampy ireo mpankafy ireo hira miisa 12 teo ho eo nentin’ireo poeta mihira fitia 4 mirahalahy mikambana ao anatin’ilay tarika mpiangaly RNB sy Soul frantsay, Poetic Lover, tetsy Antsahamanitra ny sabotsy teo.
Tarika Ndondolah sy Tahiry tetsy Antsahamanitra Nafana tao anaty hatsiaka ny fanamarihana ny faha-20 taona
Anisan’ireo hetsika Alatsinain’ny Pantekoty 2018 notontosaina teto Antananrivo ny seho fanamarihan’ny tarika Ndondolah sy Tahiry ny faha-20 taonany.
Nitonona ho mpanaradia omby very ireo dahalo tonga tao Ampitakely any Isinko, Kaominina vaovao ao anatin’ny Distrikan’i Tsaratanàna ny marainan’ny alahadin’ny pantekôty 20 mey 2018 tokony ho tamin’ny valo ora.